Fifidianana tany Farafangana: tsipahin’ireo ampanjaka ny filazana azy ireo ho nandray volabe | NewsMada
Fifidianana tany Farafangana: tsipahin’ireo ampanjaka ny filazana azy ireo ho nandray volabe
Nitondra valin-kafatra ho an’ireo iraka mpanara-maso ny fifidianana avy amin’ny Vondrona eoropeanina (UE). « Mahatsiaro ho voahoso-potaka izahay satria tsy marina ary tsy misy izany vola maherin’ny 10 tapitrisa Ar nomen’ny kandidà Rajoelina anay izany », hoy ny fanambaran’ny ampanjaka Antefasy, Rainizanadahy Soubielline, na i Tadatsy. Nampitandrina avy hatrany ireo namafy izany lainga sy vaovao tsy marina izany ny tenany. Nanamafy izany koa ny ampanjaka Zafisoro, Rakotonirina Faustin sy Tamoha Jeannot fa tsy hataon’izy ireo vita mora izao resabe momba ny ambara fa vola noraisin’ireto ampanjaka ireto. “Hiroso amin’ny lalindalina izahay fa fanalana Baraka anay olobe aty Atsimo Atsinanana izany”, hoy izy ireo.
Nandefa taratasy any amin’ny UE ny kandidà Rajoelina
Nohitsin’ireto ray amandreny ara-drazana ireto fa tsy manavakavaka, na tia manokana olona iray izy ireo. Anisan’ny adidy raisiny ny fanampiana ny mpitondra amin’ny fandaminana ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana ary ny olana hafa, na fifanolanana madinika eo anivon’ny fiarahamonina.
Etsy andaniny, nandefa taratasy mitsipaka tanteraka ny tatitry ny mpanara-maso eo anivon’ny UE, nilaza izany vaovao izany, ny kandidà Rajoelina, afakomaly. Nohamafisiny tamin’izany fa tsy nanatrika ny famoriam-bahoaka nataony tany Atsimo Atsinanana ireo ampanjaka ireo. Miangavy ny hanaovan’ireo iraky ny UE ireo fanitsiana izany vaovao izany ny mpanorina ny IEM.